Lucky Days Casino I-100% ibhonasi yokwamukela + 100 Imijikelezo yamahhala
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-lucky days casino
Isibuyekezo se-Lucky Days Casino
Isofthiwe:NetEnt, Play n GO, Microgaming, Big Time Gaming, Betsoft
Ibhonasi Lokukwamukela:R15,000 ne 100 ama-spins Ibhonasi
R300 Ibhonasi Elingena Diphozithi
I-Lucky Days ilapha kubadlali be-inthanethi abavela emazweni amaningi, ikakhulukazi lawo avela eNingizimu Afrika. I-Lucky Days Casino iyisikhungo esisha se-iGaming esethulwe ngo-2019 ngabadlali be-Raging Rhino NV, abanokwazisa ngemidlalo esezingeni eliphakeme, banenhlanhla yokudlala ekhasino elinikwa amandla ngabathuthukisi be-software abahlonishwa kakhulu kule mboni njenge Microgaming, NetEnt , Evolution, Dlala i-‘N GO, njll.
Umphumela uba ilabhulali enkulu yemidlalo ehlukahlukene yemidlalo yasekhasino kuzo zonke izigaba. Amalungu angajabulela zonke izintandokazi zawo zakudala namavidiyo, imidlalo ye-Table, nemidlalo ebukhoma. Kumalungu amaningi, i-Lucky Days ingaba ngaphezu kwengqikithi yekhasino, ngenombolo yama-jackpots aqhubekayo namachibi wemiklomelo abanikezayo. Amalungu amasha abingelelwa ngelinye lamaphakeji amukelekile anenzuzo enkulu kulezi zikhathi zamanje, asatshalaliswa kumadiphozi amathathu okuqala.
Amalungu futhi anenhlanhla yokucubungula ngokushesha izinkokhelo nemikhawulo ephakeme yokuhoxa kunamanye amakhasino amaningi edijithali. Iwebhusayithi ye-Lucky Days ilandela imigomo ye-PCi ne-DSS futhi ifakwe ubuchwepheshe bokubethela i-Rapid SSL bokuvikelwa kwedatha. I-Lucky Days Casino nayo yaziwa ngokusekela kwayo amakhasimende okuphendulayo. Lena ikhasino yesimanje, enganikeli inguqulo elandekayo futhi ingafinyeleleka kuphela kumodi ebukhoma kuma-desktops nakuma-mobiles.
I-Lucky Days Casino eNingizimu Afrika
Imithetho yaseNingizimu Afrika ayiwavumeli amakhasino aku-inthanethi angaphansi kwegunya lawo. Abathandi bemidlalo yezemidlalo banokukhetha kwamakhasino asemhlabeni, afafazwa ezweni lonke nasezifundweni zomjaho. Kodwa-ke, umthetho awuwenqabeli abantu baseNingizimu Afrika ukuthi badlale kumakhasino aku-inthanethi angaphandle. Lokho kusho ukuthi, akuwona wonke amakhasino amukela abadlali abavela kuRainbow Nation, futhi labo abangakwenzi ukuhlinzeka ngokuhlukahluka kwezemidlalo nokusebenziseka kokuthengiselana kwamabhange, nezinye izinsizakalo ngenxa yezingqinamba zomthetho.
Ngenhlanhla kubahlaseli baseNingizimu Afrika, kunamakhasino amasha ambalwa ahlinzeka abadlali abavela kuleli. Ikhasino ye-Lucky Days ingaba nenhlanhla ikakhulukazi kuwe. Izikhala ziyisigaba sokudlala esithandwayo sabantu baseNingizimu Afrika kanti iLucky Days Casino inendawo yokwamukela izivakashi enkulu etholakala kakhulu kubanikazi bezintambo bezwe. Lokhu futhi kuyikhasino elisebenziseka kalula elihamba phambili, okujabulisa kakhulu amalungu aseNingizimu Afrika asevele ajoyine le sayithi entsha ye-iGaming.
Kunezinye izinzuzo ezahlukahlukene zokuvula i-akhawunti yokudlala eLucky Days Casino. Abadlali baseNingizimu Afrika banenhlanhla ikakhulukazi ngoba ikhasino lamukela futhi likhokhe ngeRandi laseNingizimu Afrika ngaphandle kokunikeza uhla lwezindlela zokukhokha ezisebenziseka kalula neziphephile. I-Lucky Days Casino nayo inenguqulo yewebhusayithi enikelwe izinethiwekhi zeRainbow Nation. Ikhasino libuye lisekele ezinye izimali ezahlukahlukene ezinokukhethwa kukho okugcwele kwezamabhange okuhlinzekela amalungu emhlabeni jikelele.
Amakhodi Webhonasi Yokwamukela e-Lucky Days Casino
Abadlali bazoba nenhlanhla enkulu ukuvula i-akhawunti e-Lucky Days Casino manje. Banephasela lokwamukela elikhangayo elibalindile, elisatshalaliswa ngaphezu kwezigaba ezine kanye nemadiphozithi amathathu okuqala. Kubandakanya ibhonasi ephelele engu-R 15,000 ne-100 yemijikelezo yamahhala. Nakhu ukuthi kudlala kanjani:
I-100% Ibhonasi Yokwamukela + I-100 Yemijikelezo yamahhala kuDiphozithi yokuqala
Idiphozi yokuqala inikeza amalungu amasha ibhonasi efanayo engu-100% efinyelela ku-R 1,500. Lokhu kusho ukuthi uma befaka u-R 1,500, baba no-R 3,000 abadlala ngayo.
Ngemuva kwediphozi yokuqala, amalungu athola 10-imijikelezo yamahhala nsuku zonke ngezinsuku eziyi-10 eziqondile zokudlala ku-Book of Dead. Lokho kungamathuba amaningi okwenza ukunqoba okuphawulekayo kusenesikhathi.
Idiphozi yesibili iphinde yamukelwe ngamabhonasi afanayo angu-50%, angakhuphuka afike kunani elingu-R 3,000, anikeze amalungu ithuba elihle kakhulu.
Idiphozi yesithathu izala u-25% webhonasi ehambisanayo efinyelela ku-R 10,500. Ibhonasi ngempumelelo inkulu ngangokunokwenzeka.
Iphakethe lokwamukela lingaphansi kwemigomo nemibandela futhi kunconywa ukuthi amalungu amasha azijwayeze nokuhlinzekwayo.
Amakhodi Ebhonasi Engadingidiphozithi eLucky Day Casino
I-Lucky Days ayinikezi ibhonasi yokungafaki-mali okwamanje.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yi-Lucky Days Casino
I-Lucky Days Casino ayifaki uhlobo lwamabhonasi ajwayelekile. Amaphromoshini angeziwe athunyelwa nge-imeyili kumalungu akhethe ukuthola ukuxhumana okunjalo. Ngakho-ke gcina iso lakho ngaphandle uma ungomunye wabo noma bhalisa manje. ILucky Days nayo ayinalo uhlelo lokwethembeka noma iVIP Club nayo.
Kodwa-ke, kunesici senhlanhla kulesi sici sokusebenza seLucky Casino. Ukukhushulwa okumbalwa kusho ukuthi amalungu akudingeki alwe nezidingo zokubheja. Lokhu kuphinde kusheshise inqubo yokuhoxa yamalungu angacela imali yawo ayitholile ngokushesha.
Kukhona ulwelwesi lwesiliva ngokungabikho kohlelo lokwethembeka. Amalungu e-Lucky Days Casino angadlala ngejubane lawo nangokuzikhandla ngaphandle kokuzikhandla ukufeza izinhloso zohlelo noma ukufinyelela emazingeni alandelanayo e-VIP Club.
Ungangena kanjani futhi ubhalise ku-inthanethi eLucky Days Casino
Ukuvula i-akhawunti eLucky Days Casino kuyindaba elula yezinyathelo ezimbalwa.
Iya ku Lucky Days Casino
Shaya inkinobho ethi ‘Dala i-Akhawunti’ kufasitelana lesikhungo
Faka i-imeyili yakho kufomu elizovela phezulu
Chofoza ku-‘Enter’ ukuze uvumelane nemigomo yobumfihlo
Setha iphasiwedi kwifomu elilandelayo bese ucindezela u-‘Enter’
Faka inombolo yakho yeselula efomini eliphumelelayo bese uqhafaza ku-‘Enter’
Qinisekisa igama lakho ngokucindezela u-‘Enter’
Gcwalisa ikheli lakho kwifomu elilandelayo bese uqhafaza ku-‘Enter’
Gcwalisa usuku lwakho lokuzalwa ekhasini elilandelayo bese uqhafaza ku-‘Enter’
Kwifomu elilandelayo cindezela, ‘Ngiyaqinisekisa’ ukwamukela imigomo, inqubomgomo yobumfihlo ingaqinisekisa ukuthi ungaphezu kweminyaka engu-18 ubudala
Halala! Izinsuku zakho zenhlanhla manje seziqalile. I-Lucky Days Casino inezinguqulo ezahlukahlukene zamapulatifomu zamazwe asekelwa ngemali esunguliwe. Abadlali baseNingizimu Afrika ababhalisa kwi-UK version bazodluliselwa ngokuzenzakalelayo kuwebhusayithi yaseNingizimu Afrika ukuze baqale ukudlala.
AmaKhasino aku-Inthanethi Imidlalo ongayidlala ku-Lucky Days Casino
Kafushane ngokuwina i-jackpot eyizigidi zamarandi, umtapo wolwazi wemidlalo yinto enhle kakhulu ukwenzeka kumalungu eLucky Days Casino. Lokhu kungenxa yezitudiyo zemidlalo ezihlonishwayo, eziqhuba injini yemidlalo yekhasino. Lokhu kufaka phakathi iMicrogaming, NetEnt, iSoftBet, Red Tiger, Evolution, Quickspin, Pragmatic Play, Play ‘N GO, ngaphandle kwabanye ochwepheshe abaningi be-iGaming software. Njengoba i-Lucky Days Casino inamawebhusayithi ahlukile wama-geographies ahlukene, uhlu olugcwele kunzima ukuluthola.
Akunakusho ukuthi, iningi labathuthukisi bemidlalo ligxile emidlalweni yama-slot, ikakhulukazi ama-video slots. Kepha eziningi zalezi zinkunzi zesoftware ezinjengeMicrogaming, i-Play ‘N GO, ne-NetEnt, njll. Nayo ibhekelela abanye abalandeli bemidlalo yetafula, namakhasino abukhoma, njll. I-Evolution Gaming iyafana nemidlalo ebukhoma. Umkhiqizo owaziwa umhlaba wonke uhlinzeka ngemidlalo nabathengisi abanobungane, ababukhoma abangakhuluma izilimi eziningi, futhi ezingadlalwa ngokusheshisa okukhulu, ukusakazwa kwesikhathi sangempela, i-bang enkabeni yedivayisi yakho.
Ukuwina inqubekelaphambili yezigidi eziningi kungaba yinto engavamile, kepha iLucky Days Casino amathuba anele okudlala izinhlobonhlobo zamaphakethe ajabulisayo futhi azuze nemiklomelo yemali ezinkulungwaneni zamarandi nangaphezulu. Kalula nje, ikhasino liyindawo yokudlala ebonakalayo yazo zonke izinhlobo zamaslots, imidlalo yetable, imidlalo ebukhoma nokuningi. Yonke imidlalo icwebezele ihluzo nekhwalithi yomsindo ngaphandle kokunikeza uhla lwezici zokudlala ezilungele abadlali njengamabhonasi akhiwe ngaphakathi nemi-jikelezo yamahhala.
Njengoba kushiwo ngenhla, iLucky Days iyikhasino eku-inthanethi elizodlalwa kwiziphequluli ngesikhathi sangempela, elisiza kakhulu abadlali abasendleleni futhi lifaka iningi labantu baseNingizimu Afrika. Isayithi linemidlalo engaphezu kwenkulungwane emtatsheni wayo wezincwadi, ohlukaniswe kahle waba yi-New Games, Live Casino, Slots, Jackpots, Table Games, nayo yonke Imidlalo. Kukhona futhi ibha yokusesha yokufinyelela okusheshayo.
Indawo yokwamukela izivakashi yeLucky Days Casino iyaqondakala ukuthi iqukethe ingxenye yengonyama yephothifoliyo yemidlalo. Inamakhulu ama-slots ama-3-reel slots, kanye nama-4-, 5, nama-6-reel video slots anezindikimba ezinjengezinganekwane, i-adventure, Horror, Fairytale, Action, Wildlife, Fruits, kanye nezisekelo zokulandisa kumabhayisikobho athandwayo nemibukiso ye-TV .
Ezinye zezindawo ezaziwa kakhulu ngeLucky Days ngamaGods of Death, Sticky Bandits, Serengeti Kings, The Shadow Order, Book of Dead, Solar Queen, Vikings Go to Hell, Book of Cleopatra, Fruit Shop, ngaphandle kwamakhulu ezinye izihloko ezishisayo .
Ama-jackpots aqhubekayo yizindawo eziphakeme ze-iGaming zabahlaseli abathanda ukuphupha okukhulu nokubheja kuma-jackpots baletha inhlanhla ezimpilweni zabo. Abathuthukisi bemidlalo ezinsukwini zeLucky Days bane-network enkulu yama-jackpots angenza izigidigidi ezisheshayo. Kodwa-ke, iLucky Days nayo inezinombolo eziningi zama-jackpots ezinikeza amathuba amaningi wokuwina okuncane, kepha amanani acebile impela.
Amanye ama-jackpots ashisa kunawo wonke ama-slots neminye imidlalo afaka i-Mega Moolah franchise, Major Millions, King Cashalot, Hall of Gods, Arabian Nights, Imperial Riches, Treasure Nile, Tunzamunni, Divine Fortune, Leprechaun Goes to Hell, and Gunslinger Reloaded, njll. .
Kuvamile, futhi kushiwo kahle, ukuthi abadlali bekhasino bangempela batholakala ematafuleni. Abadlali bekhadi bathembele kumakhono abo okudlala, ngaphandle kwamadili ezandla okungahleliwe, futhi bajabulele ubunzima bokudlala. Hhayi-ke, manje kunezinsuku zenhlanhla zalaba badlali abakhethekile, abanezinhlobonhlobo ze-blackjack, i-baccarat, ne-poker ukuhlukahluka ku-single and multi-hand. Abalandeli beRoulette nje nabo ngeke badumazeke.
Vele uhlale kunoma yiliphi kulawa amatafula: I-Classic Blackjack Gold, i-Blackjack Neo, i-First Person Lightening Roulette, i-Casino Hold ‘Em, i-Blackjack Multi-hand, i-European Roulette, i-European Blackjack, i-Texas Hold Em Pro, i-Three Card Poker, ne-Pontoon, ngaphandle kwabanye.
Akubona bonke abadlali abangaba nenhlanhla yokudlala eLas Vegas noma eMonte Carlo. Kodwa-ke, kukhona abathuthukisi be-software yekhasino abanjengo-Evolution Gaming nabanye abahlinzeka ngesipiliyoni esiseduze salezi zindawo ngemidlalo ebonakalayo ebukhoma, ekunika isipiliyoni semidlalo yetafula langempela, nabathengisi ababukhoma nokuxhumana nabanye abadlali bakude. ILucky Days inemidlalo ethile ebukhoma efana nale:
Live Roulette, Live Blackjack, Live Casino Hold ‘Em, Live Baccarat, Caribbean Stud Poker, Dream Catcher, Common Draw Blackjack High and Low rollers, Dream Catcher, Baccarat Control Squeeze, Monopoly Live, Lightening Roulette, neSpeed ​​Baccarat, njll.
Ingabe i-Lucky Days Casino iyatholakala nakuselula?
I-Lucky Days Casino ihlelelwe ukuthi ibe nobungane obukhulu kakhulu beselula. Lokhu kusho ukuthi ipulatifomu iyahambisana ngokuphelele nazo zonke izinhlelo zokusebenza ezingaphambili ze-mobile njenge-Android, iOS, Windows Phone, kanye neBlackberry. Ikhasino lingadlalwa kuwo wonke ama-Smartphones namathebulethi angaleso sikhathi. Ingxenye engcono kakhulu ukuthi ikhasino akudingeki ilandwe. Ukudlala ku-inthanethi kuziphequluli kunikeza isipiliyoni semidlalo esiyingqayizivele kubadlali abathanda ukudlala ekuhambeni.
I-Lucky Days Casino isekela zonke iziphequluli zesimanje ezifana ne-Chrome, Safari, Firefox, neM.S. Umphetho. Konke okudingayo ukuxhumana kwe-inthanethi okuthembekile futhi ungadlala kokuqukethwe kwenhliziyo yakho nokwesikhwama sakho semali. Izinsuku zakho zihlala zinenhlanhla kungakhathalekile ukuthi uxhumeke kwinethiwekhi ye-2G, 3G, 4G, LTE noma ye-Wi-Fi. Vele, kuyisibusiso esingeziwe uma iselula yakho ithola ukuvuselelwa kokuphepha njalo. Ungadlala ngokulinganayo kuma-Smartphone wesabelomali noma ama-iPhones, ama-iPads nama-iPod.
Ngingayilanda i-Lucky Days Casino kuselula yami?
I-Lucky Days Casino ayinayo inguqulo engalandeka. Amakhasino amanje edijithali ayekile ukunikela ngezinhlelo zokusebenza, ngoba abadlali bakuthola kulula ukudlala ku-inthanethi kuziphequluli. Izinhlobo ezilandekayo zithatha isikhala esingeziwe futhi zinciphisa inqubo. Vele usebenzise uxhumano lwakho lwe-inthanethi ukulayisha iwebhusayithi yeLucky Days Casino bese ungena ngemvume ukuze udlale. Ungasebenzisa imininingwane efanayo yokungena ngemvume ye-akhawunti yakho ye-PC, noma uvule kalula i-akhawunti ngeselula yakho.
Izindlela Zokukhipha Zamukelwa e-Lucky Days Casino
Indlela Yokukhipha Imali
Visa/MasterCard Yebo Izinsuku 2-5
Izindlela Zokubhenkha Ezamukelwe E-Lucky Days Casino
Isungulwe: 2017 Inombolo yamahhala ye-SA: Ayikho
Isetshenziswa ngu: Raging Rhino N.V., Curacao I-imeyili: Ifomu le-imeyili kusigaba sokuxhumana nathi ngaphakathi ‘kosizo’
Inguqulo Yokudawuniloda: Cha 24/7 365 ukwesekwa: Yebo
Inguqulo Engadawunilodiwe: Yebo Iwebhusayithi: Chofoza lapha ukuvakashela isayithi
Izinzuzo nezindleko ze-Lucky Days Casino
Yini Eyenza I-Lucky Days Casino Ukhethe Olukuthandwa Abadlali BaseNingizimu Afrika?
I-Lucky Days Casino ingelinye lamakhasino ambalwa ahlinzeka ngokukhethekile abadlali baseNingizimu Afrika kanye nabantu abavela kwamanye amazwe. Nazi ezinye zezinzuzo amakhasino adlalwa ngabadlali abavela eNingizimu Afrika:
Azikho izingqinamba ekubhalisweni kwabadlali baseNingizimu Afrika
Uhlobo lwewebhusayithi lunikezelwe kubadlali abavela eNingizimu Afrika
Zonke izenyuso kanye namabhonasi ayatholakala kubantu baseNingizimu Afrika
Ukwesekwa okugcwele kwamadiphozithi nokukhishwa kwemali eNingizimu Afrika
Imali esheshayo kanye nokuphuma kwemali
Imali yebhonasi yokwamukela
Imidlalo engaphezu kuka-1300 kufaka phakathi ama-jackpots acebile aqhubekayo
Izikhalazo eLucky Days Casino South Africa
ILucky Days Casino ibilokhu isebenza kusukela ngo-2019 futhi asikaziboni izikhalazo ezinkulu. Ngokuphambene nalokho, ukubuyekezwa kwabadlali kuyakhuthaza konke. Vele, lokhu kungashintsha ngokuhamba kwesikhathi. Ngokuqinisekile sizogcina lesi sigaba sibuyekezwa kuleso sehlakalo. URaging Rhino, umnikazi wekhasino akaziwa ukusebenzisa noma iyiphi enye ikhasino eku-inthanethi, futhi kubonakala sengathi uphumelele ekunikezeni umuzwa omuhle we-iGaming kumalungu ayo.
Ngabe i-Lucky Days Casino iyisemthethweni eNingizimu Afrika?
Ngiyikhipha kanjani Imali kwiLucky Days Casino?
Ukuze ukhiphe imali kwiLucky Days Casino, udinga ukwenza isicelo ku-‘Cashier ‘yekhasino. Nakhu ukuthi ungakwenza kanjani:
Iya ku-luckydays.com bese ungena ngemvume ku-akhawunti yakho
Hlola ibhalansi ye-akhawunti yakho
Bheka ukuthi awekho yini amabhonasi asebenzayo
Qiniseka ukuthi uzifezile izidingo zakho zokubheja nezinye izimo
Yenza isicelo sokukhipha imali kuphela ngemuva kokuqeda lezi zinyathelo ezimbili ezingenhla, uma kungenjalo ikhasino izokwenqaba ukukhokha
Iya ku ‘Cashier’ bese uqhafaza ekukhipheni kwemali
Faka inani elidingekayo bese ukhetha indlela yakho yokukhokha
Ikhasino lingacela amakhophi omazisi nemininingwane yekhadi lesikweletu, uma leyo kuyindlela yakho yokukhokha. Lokhu kuyingxenye yemibandela ye-Know Your Customer yeziphathimandla zamalayisense. Uma i-Lucky Days icele amadokhumende e-ID, ikhasino ngeke lisebenze isicelo sakho sokuhoxa lize liqinisekiswe.
Yini i-Lucky Days Casino?
ILucky Days Casino iyi-casino eku-inthanethi, esungulwe ngo-2019. Yamukela abadlali abavela emazweni amaningi kubandakanya iNingizimu Afrika. Ikhasino inelayisense yokudlala evela kuziphathimandla ezidingekayo eCuracao. Imali eyenziwayo neyamukelwayo ngezimali ezahlukahlukene kufaka phakathi iRandi laseNingizimu Afrika. Ikhasino ingafinyeleleka futhi idlalwe ku-inthanethi kumakhompyutha wakho nakuma-mobiles.
Ngubani ophethe i-Lucky Days Casino?
ILucky Days Casino iphethwe futhi iqhutshwa yiRaging Rhino N.V., ikheli layo elibhalisiwe elingu-Abraham de Veerstraat 7, Willemstad, Curacao. Le nkampani inikwe ilayisense yiCuracao Gaming Authority.
Ingabe i-Lucky Days Casino inezici zokubheja kwezemidlalo?
I-Lucky Days Casino ayinayo incwadi yezemidlalo. Inikela kuphela ngemidlalo yasekhasino kanti ezinye izikhala zinazo izingqikithi zemidlalo.
Iphephe Kangakanani i-Lucky Days Casino?
I-Lucky Days Casino inikeza indawo yokudlala ephephe kakhulu kumalungu ngenxa yezizathu ezilandelayo:
Inelayisense yokugembula evumelekile iCuracao Gambling Authority
Amageyimu ekhasino avela konjiniyela abathembekile kuphela abanjengoMicrogaming neNetEnt, njll.
I-Lucky Days Casino ihambisana ne-PCI DSS
I-Lucky Days yamukelwa yinhlangano ye-Top Irish Casinos
Inezinqubomgomo eziqinile zokuqinisekisa ukugembula okulungile futhi okunesibopho
Ikhasino inikeza izindlela zokukhokha ezivikelekile kuphela